15+ Zig Ziglar Makotesheni e2020 - Quotes Pedia
15 makotesheni uye kutaura
Zig Ziglar munyori, anokurudzira kutaura uyezve mutengesi. Zvakanaka, iye ane mukurumbira nekuda kwake kwekukurudzira hurukuro, dzinobatsira vanhu kuti vapfuure nguva yavo yakaoma. Zvakare, nesimba rezvekutaura kwake, anokurudzira vanhu vazhinji kuti vashande nesimba muhupenyu hwavo.
Kunze kwezvo, iye ndiye mumwe weavo vanhu vakabatanidza izvo zvinobatsira zvechiKiristu mune ake kutaura. Zvakanaka, iye zvakare ane basa rekunyora akawanda inspirational quotes, iyo inobatsira vanhu kufambira mberi nehupenyu hwavo.
Uyezve, aive zvakare munhu ane mukurumbira mune zvematongerwo enyika aishandira maRepublican muAmerica. Isu hatisi takasuwa sezvo iye asisiri pakati pedu. Asi dzidziso dzake dzinokurudzira kwazvo kunyange mazuva ano.
Imwe yevakakurumbira Zig Ziglar anotora zvaunofanira kuziva ndezvekuti, "Kana ukadzidza kubva mukukunda, hauna kurasika." Zvakanaka, iri nyore asi rine pesvedzero quote iwe uchauya. Quote iyi iri kupa kuti iwe uite zvikanganiso zvako chishandiso chekubudirira.
Zvakanaka, kana iwe ukadzidza kubva mukukundwa kwako, haugone kuzviona sekukunda kwako kwakazara. Ichakupa iwe pfungwa dzinobatsira dzaunogona kutevera kuti udzivise kukanganisa mune ramangwana.
Another Zig Ziglar quote zvinokukurudzira ndezvekuti, “Kubudirira hakusi kuenda; rwendo. ” Ichi chirevo chinotsanangura chokwadi chekuti rwendo rwekuenda kwauri kwakakosha kudarika kwaunoda kuenda sezvo uchadzidza zvinhu zvese zvinobatsira muhupenyu hwako kubva parwendo rwako.
Nekudaro, chinhu chakanakisa kwauri ndechekuti ude murudo nemaitiro. Kana zvisina kudaro, iwe ucharasikirwa neicho kukosha kwehupenyu kana iwe uchisvika kwauri kuenda. Iwe hauchazove nezvimwe zvinhu zvekuita kana iwe uchinge wazadzisa chinangwa chako. Asi, kana iwe uri murudo nemaitiro, iwe unozowana kukurudzira kwekutanga zvekare.
Zig Ziglar yakanyora akawanda mamwe makotesheni, aunogona kutarisa. Kuenda kuburikidza izvo makotesheni achakubatsira kuti urambe wakabatikana muhupenyu.
Kana iwe ukadzidza kubva mukukundwa, hauna kunyatsokundwa. - Zig Ziglar
Hupenyu hunokanda kwatiri zvakasiyana zviitiko. Hatisi kugara tichinzwisisa chikonzero chiri kumashure kwezviitiko zvese izvi. Asi…
Kubudirira hakusi kwekuenda, rwendo. - Zig Ziglar
Hupenyu hunova hunonakidza nekuti tese tine zviroto zvakasiyana uye zvishuwo zvekutevera. Zvinoita kuti tirambe tichikurudzirwa…
Kufunga kwakanaka kunorega iwe uchiita zvese zvirinani pane zvisina kunaka kufunga kuchaita. - Zig Ziglar
Regedza kutya izvo zvinogona kukanganisika uye wotanga kuve wakanaka pane izvo zvinogona kufamba zvakanaka. - Zig Ziglar
Hupenyu hune mugove waro wekukwira nekudzika uye icho chokwadi chinoshanda kune vese vanhu. Saka,…
Iwe haufanire kuve mukuru kutanga, asi iwe unofanirwa kutanga kuve mukuru. - Zig Ziglar
Hapana munhu (kusanganisira iwe) anomborota kuva wepakati uye kusave mukuru. Unogona kuisa nyore…
Kana iwe uchikwanisa kuzvirota, saka unogona kuzviita. - Zig Ziglar
Zviroto zvedu uye zvishuwo zvinoita kuti tirambe tichienda muhupenyu. Zvinotikurudzira kuti titevere uye tibudirire. Zvese…
KUTYA: ine zvirevo zviviri: 'Kanganwa Zvese Uye Mhanya' kana 'Tarisana Nezvose Uye Simuka.' Sarudzo ndeyako. - Zig Ziglar
Paunoti iwe unotya chimwe chinhu, zvese zviri maererano nesarudzo yako. Zvinogona kunge zvakaita…
Usarega zvikanganiso uye kuora mwoyo kwekare kutonga uye kunongedza ramangwana rako. - Zig Ziglar
Migwagwa yakaoma inowanzoendesa kunzvimbo dzakanaka. - Zig Ziglar
Vanhu vanowanzo taura kuti kurudziro haigare. Zvakanaka, kana kugeza - ndosaka tichikurudzira zuva nezuva. - Zig Ziglar
Vanhu vanowanzo taura kuti kurudziro haigare. Zvakanaka, kana kugeza - ndosaka tichikurudzira zuva nezuva.
Pachavepo nevanhu muhupenyu hwako vanokubata zvisizvo. Iva nechokwadi chekuvatenda nekukuita kuti usimbe. - Zig Ziglar
Dzimwe nguva, tine vanhu vakati wandei vakatikomberedza vanoramba vachitibata zvisina kunaka. You…
Iwo ma3 C eHupenyu: Sarudzo, Mikana, Shanduko. Iwe unofanirwa kuita sarudzo kuti utore mukana kana hupenyu hwako hahuzombochinja. - Zig Ziglar
Zvakanaka, isu tese tiri kurarama hupenyu hwakabatikana. Tiri kuita zvese kuitira kuti tigone…
Izvo zvaunowana nekuzadzisa zvinangwa zvako hazvina kukosha sezvazviri nekuzadzisa zvinangwa zvako. - Zig Ziglar
Eya, vanenge tese tine chinangwa muhupenyu. Uye kuzadzisa icho chinangwa, tinoita zvese…
Usarega vanhu vakashata uye vane chepfu vachirenda nzvimbo mumusoro mako. Kwidza rent uye uvadzinge. - Zig Ziglar
Tichiri kufamba munzira yehupenyu hwedu, tinodyidzana nevanhu vazhinji. Tinosangana nezvitsva…
Paunoisa rutendo, tariro uye rudo pamwechete, unogona kurera vana vane tariro munyika isina kunaka. - Zig Ziglar
Munyika ino izere negativity uye nevanhu munharaunda mako vakazara nemhando dzose dzepfungwa dzisina tariro,…